Vehivavy, Kongolezy Ary Minisitra Ao Anaty Governemanta Gaovao Italiana · Global Voices teny Malagasy
Vehivavy, Kongolezy Ary Minisitra Ao Anaty Governemanta Gaovao Italiana
Voadika ny 07 Mey 2013 18:09 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Italiano, English, Ελληνικά, polski, Français
Roa volana taorian'ny fifidianana solombavam-bahoaka ny 24 sy 25 febroary 2013, Enrico Letta, notendren'ny Filoha Giorgio Napolitano mba hanangana governemanta hiarahana, hoy ny nambaran'ireo mpikambana tao amin'ny antokony. Anisan'ireo nahagaga, ny fanendrena ny Dokotera Cécile Kyenge, Profesora momba ny fitsaboana ny faritry ny loha, ho amin'ny toeran'ny “Ministre de l'Intégration“. Mpihavy avy amin'ny Repoblika Demokratikan'i Kongo, izy no tompon'andraikitra voalohany avy amin'ny mpifindra monina nandray ny toeranà minisitra tany Italia.
Manolotra azy amin'ireto teny ireto ny tranonkala oeildafrique.com:
Cécile Kyenge, mpikambana amin'ny Antoko Demokraty, dia teraka ny 28 aogositra 1964 tany Kambove any amin'ny Repoblika demokratikan'i Congo.
Tonga tany Italie tamin'ny taona 1983 izy ary ankehitriny dia teratany Italiana. Nahazo ny diplôma maha dokotera sy mpandidy azy izy tao amin'ny Anjerimanontolo katolikan'i Roma, talohan'ny niofanany manokana mikasika ny fitsaboana ny faritry ny loha tao amin'ny Anjerimanontolon'i Modène.
Dr. Cécile Kyenge, sary avy ao amin'ny pejiny Facebook
Voafidy tao amin'ny laharan'ny antoko demokraty (PD, ankavia), nandritra ny fifidianana solombavam-bahoaka teo aloha, tany amin'ny faritr'i Émilie-Romagne, izy koa no vehivavy afrikana voalohany nahazo seza tao amin'ny Parlemanta. Tao anaty lahatsoratra iray an'i René Kouame, navoaka tao amin'ny afrokanlife.com dia azo vakiana hoe:
Tsy vao miana-mandeha amin'ny fiainana ara-politika ao Italia i Cécile Keyenge hajaina. Voafidy ho mpanolotsaim-paritra tao Emilie Romagne izy nandritra ny faran'ny fe-potoam-piasàna fanaovan-dalàna farany teo. Tao anatin'ny antoko demokratika Italiana dia nisahana ny toeran'ny tompon'andraikitry ny fihaonambe mikasika ny fifindra-monina nandritra ny taona maro izy. Mpitolona ho an'ny zon'olombelona, Cécile Kyenge dia niady nandritra ny taona maro mba hanajana ny zon'ireo mpifindra-monina any Italy. Filoha nasionaly sy tompon-kevitra amin'ny hetsika nasionaly ny 1 martsa (Fikambanana nasionaly iray miady amin'ny karazana fanavakavahana sy ho fanajana ny zon'ireo mpifindra-monina).
Ity lahatsary ity, dikasary avy tamin'ny fampahalalam-baovao an-tsary, maneho an'i Cécile Kyenge nanao voady teo anoloan'ny Filoha G. Napolitano tao amin'ny Lapan'i Quirinal:
Niady nandritra ny taona maro izy mba hanatsarana ny lalàna mikasika ny mpiavy, indrindra ny mikasika ny fanafoanana ny heloka momba ny fifindra-monina an-tsokosoko mahatonga ny fonja italiana ho feno mpiavy izay, ho an'ny maro, ny hany heloka tokana natao dia ny tsy fananana taratasy. Ny tranonkala auxinfosdunain.blogspot.fr dia manoritra koa ny diany toy izao :
Solombavam-bahoakan'ny Antoko demokraty (PD, ankavia), ilay vehivavy voalohany afrikana manana seza ao amin'ny Parlemanta dia teo ampanomanana antontan-taratasy mikasika “ny fanavakavaham-bolon-koditra manaraka ny rafitra” any Italy. Miady koa izy ho an'ny fanafoanana ny heloka ataon'ny mpiavy antsokosoko ary maniry ny hanalalahana ny tsenan'ny asa ho an'ireo vahiny.
Ho an'i Cécile Kyenge, ilaina ny “miady amin'ny herisetra ara-nofo, ara-bolon-koditra, fankahalana ny fiarahan'ireo mitovy taovam-pananahana ary ireo karazany hafa rehetra”. Ny PD, izay misy an'i Letta, dia faly amin'io safidy io izay “mampiseho firindràna amin'ny finoana hisian'ny Italy iray tsy miandany ary tena manana kolontsaina marolafy”.
Ny ambaran‘ny bilaogy jolpress.com momba azy :
Ny toerany amin'ny maha-solombavam-bahoaka azy, dia azony noho ny fandraisany andraikitra eo amin'ny Antoko demokraty ao amin'ny faritr'i Émilie-Romagne. Any izy dia miandraikitra, indrindra indrindra, ireo olana mikasika ny fifindrà-monina – andraikitra izay himasoany eo anivon'ilay governemanta vaovao.
Eo afovoan'ny adiny, ara-politika sy anaty fikambanana, ny fivezivezena malalaka ho an'ny olona sy ny finiavana hanao lalàna vaovao mikasika ny maha-olom-pirenena. Ny septambra 2010, nanjary lasa mpitondra teny nasionalin'ny tambajotra Primo Marzo izy. Nampiroborobo ireo zon'ny mpiavy sy ireo zo maha-olombelona izy tamin'izany.
Ny Filoha Giorgio Napolitano, teo amin'ny faha 88 taonany, no Filoha voalohany voafidy indray taorian'ny fotoam-pitondràny voalohany. Nandritra ny fianianany, ny bilaogy afrokanlife.com dia nampahatsiahy fa ny Filoha dia :
nampivoitra “ny hanaovana fanavaozana, ny fanovàna ankapobeny sy ny fandraisana anjara betsaky ny vehivavy”. Andraikitra tontosa miaraka amin'ny amina salan-taona 53 (64 tao amin'ny fahefana mpanatanteraka fony faha-Mario Monti) ary iray ampaha-telon'ny vehivavy (minisitra 7 amin'ny 21, lohalaharana any Italy).
Fanampin'izany, endrika tsy fantatra marobe no mipoitra ao amin'ityy governemanta ity, toa an'i Cécile Kyenge, avy any amin'ny Repoblika demokratikan'i Kongo, voatendry ho “ministre d l'Integration”, vehivavy mainty hoditra voalohany mandray anjara amin'ny governemantan'i Italy, na Josepha Idem, tompondaka olaimpika amin'ny Kayak, izay manana ny zava-bita be indrindra amin'ny isan'ny fandraisana anjara tamin'ny JO teo amin'ny vehivavy, voatendry ho minisitry ny Fitoviana, ny Tanora sy ny Fantanjahantena.
Talohan'ny fifidianana i Cécile Kyenge dia efa namaritra sahady ny tanjony mikasika ny adiny tao amin'ny lahatsoratra navoaka tamin'ny bilaogy starducongo.com:
“Ny Filatsahako dia te-ho mpisolo tena sy mpitondra tenin'ireo “Italiana vaovao” (fiteny ampiasaina hilazana ireo vahiny izay lasa italiana), ireo vahiny izay tsy mitady afatsy ny hitàna ny toerana maha olom-pirenena azy. Solombavam-bahoakan'ny Repoblika, ny feoko koa dia tsy maintsy hiaro ny vondrom-piarahamonin'ny olom-pirenena italiana, amin'izay inoako, ny fifangaroana safiotra dia afaka ary tsy maintsy ho tombony amin'ny kolontsaintsika fa tsy ho sakana tahaka izay ezahan'ny sasany hampinoana nandritra ny fotoana maro”.
Mazava hoa azy, raha vao navoaka ny firafitry ny ao anaty governemanta, ireo farany havanana sy ireo mpankahala vahiny dia nitroatra mba hiampanga ny fisiany ao anatin'ireo minisitra. @adilmauro mitanisa an'i Roberto Maroni, minisitry ny atitany fahiny sady filohan'ny Ligue du Nord, tao amin'ny Twitter, tamin'ny fanampiana ny hoe:
“Cecile Kyenge non è italiana”, dicono quelli che vogliono la secessione dall'Italia. Ecco la Lega che “marcia sul razzismo” (Maroni dixit)
“Cécile Kyenge tsy italiana”, hoy ireo izay te hampisaraka an'i Italy. Inty no Ligue izay “mizotra amin'ny fanavakavaham-bolon-koditra” (dixit Maroni).
@engraz, tao amin'ny Twitter hatrany, dia maneho hevitra toy izao momba ireo fihetsika mavakavaka :
“Noraisin'ilay Italie lozabe sahady araka ny efa nampoizina” i Cécile #Kyenge. Saingy tsy hatahotra izy http://t.co/96IdxqSHGV #governoletta